कोरोना भाइरस वर्षौं रहन सक्छ तर भयाक्रान्त नबनौँ ! – Nepali Digital Newspaper
कोरोना भाइरस वर्षौं रहन सक्छ तर भयाक्रान्त नबनौँ !
कोरोनाबारे बुझ्नैपर्ने केही बुँदा
घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 1 month ago June 6, 2020
युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्ड (अमेरिका)को संक्रामक रोग केन्द्रका प्रमुखद्वारा कोभिड–१९ बारे कायम रहेको भ्रमसम्बन्धी १७ बूँदे सुझाव–
(१) कोरोना भाइरससँग हामीले महिनौँ अथवा वर्षौंसम्म पनि बस्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले भयाक्रान्त भएर जीवनलाई निरर्थक नबनाइकन यो सत्यलाई स्वीकार गर्दै बाँच्न सिकौँ ।
(२) कोशिका भित्ताभित्र प्रवेश गरिसकेको भाइरसलाई धेरै पटक तातो पानी खाएर नष्ट गर्न सकिन्न । त्यसबाट पटक–पटक पिसाब फेर्ने मात्रै हुनेछ ।
(३) बारम्बार हात धुने र दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्नु यसका लागि सर्वोत्तम उपाय हो ।
(४) कोभिड–१९ को रोगी नभएको अवस्थामा घरमा किटाणुनाशक छर्कनु आवश्यक छैन ।
(५) प्याकेज गरिएको कार्गो, पेट्रोल पम्प, किनमेल गर्ने ठेलागाडी र एटिएमबाट संक्रमण हुँदैन ।
(६) कोरोना भाइरसको संक्रमण भोजनबाट हुने होइन । अहिलेसम्म खानाबाट भाइरस संक्रमित भएको कुनै तथ्यगत सूचना छैन ।
(७) कोभिड–१९ को गैरविशिष्ट लक्षणहरू भनेको गन्ध बुझ्न नसक्नु, अत्यधिक एलर्जी र भाइरल संक्रमण हो ।
(८) घर फर्किंदा हतारिएर लुगा फेर्न अथवा नुहाउनु पर्ने आवश्यकता छैन । शुद्धता सद्गुण हो, यसलाई पागलपन बनाउनु हुँदैन ।
(९) कोरोना भाइरस वायुमण्डलमा हुँदैन । यो निकटता गर्दा श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो ।
(१०) बगैँचा र पार्कको स्वच्छ हावामा भौतिक दूरी कायम राख्दै घुमफिर गर्न सकिन्छ ।
(११) कोरोना एउटा भाइरस हो बैक्टिरिया होइन । त्यसैले यसको लागि साधारण साबुनको प्रयोग गरे पनि पर्याप्त हुन्छ ।
(१२) अनलाइन अर्डर गरेर खाना मगाउनेबारे चिन्तित हुनु पर्दैन तर त्यस्तो भोजनलाई माइक्रोवेब अथवा अन्य कुनै प्रकारले तताएर खानु पर्दछ ।
(१३) जुत्तासँग जोडिएर कोरोना भाइरस घरभित्र पुग्ने सम्भावना छैन । ड्रप संक्रमण यसरी फैलिँदैन ।
(१४) भिनेगर, अदुवा अथवा बेसारको प्रयोग गर्दा यो भाइरसबाट सुरक्षित हुन सक्दैन, तर तिनको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ ।
(१५) लामो समयसम्म मास्कको प्रयोग गर्दा श्वासप्रश्वास बाधित भई शरीरमा आक्सिजनको मात्रालाई फरक पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई भीडभाड भएको ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
(१६) सधैंभरी पञ्जा लगाइरहनु ठिक छैन । भाइरस त्यसमा टाँसिएको हुनसक्छ र अनुहार छुँदा सजिलै सर्न सक्छ । बरु हात धुने क्रममा वृद्धि गर्नु सही हो ।
(१७) जीवाणुरहित वातावरणमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको हुनाले घर बाहिरको संसारमा प्रायः गइरहनु उपयोगी हुनेछ । रोगजनक माहौलमा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता आफै सन्तुलित हुने गर्दछ । त्यसैले घरभित्र बसेर चिल्लो, गुलियो र मसलायुक्त भोजन गर्नुको साटो खुला ठाउँको भ्रमण बढी उपयुक्त हुन्छ ।
कोरोना सङ्कट वर्षौंसम्म रहिरहने हुनाले अझै पनि विधिसम्मत ढंगले काम गर्न सके यसको व्यवस्थापन सम्भव छ । लकडाउनको निरन्तरता समस्याको समाधान होइन ।